(၅)ကွိမျမွောကျရှဖေိနပျဆုကို ဟယျရီကိနျး ပိုငျဆိုငျနိုငျမလား? – the One Sports Journal
(၅)ကွိမျမွောကျရှဖေိနပျဆုကို ဟယျရီကိနျး ပိုငျဆိုငျနိုငျမလား?
ယူရို-၂၀၂၀ အုပျစုတှငျးမှာ ဂိုးပေါကျပြောကျခဲ့ပမေယျ့ ဂြာမနီကို အနိုငျရခဲ့တဲ့ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့နဲ့ ယူကရိနျးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ကှာတားဖိုငျနယျနှဈပှဲဆကျ ဂိုးသှငျးခဲ့သူ ဟယျရီကိနျးဟာ အခုဆိုရငျ ယူရိုပွိုငျပှဲရဲ့သှငျးဂိုးအမြားဆုံးရှဖေိနပျဆုအတှကျ ပွေးလမျးကွောငျးပျေါ ပွနျလညျရောကျရှိလာခဲ့ပါပွီ။
အခုလောလောဆယျ ယူရိုပွိုငျပှဲရဲ့သှငျးဂိုးအမြားဆုံးစာရငျးမှာ ပျေါတူဂီနာမညျကြျောကစားသမား စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ ခကျြအသငျးတိုကျစဈမှူးပကျထရဈရှဈချတို့က (၅)ဂိုးစီနဲ့ဦးဆောငျနပွေီး သူတို့နောကျမှာတော့ ဘနျဇီမာ(ပွငျသဈ)၊ လူကာကူ(ဘယျလျဂြီယံ)၊ ဖော့ဈဘတျ(ဆှီဒငျ)တို့က (၄)ဂိုးစီနဲ့ရပျတညျနပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီကစားသမားတှအေားလုံးရဲ့ လကျရှေးစငျအသငျးတှကေ ပွိုငျပှဲကနထှေကျသှားရပွီဖွဈလို့ ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့အထိရောကျရှိနတေဲ့ ဟယျရီကိနျးက ရှဖေိနပျဆုဆှတျခူးဖို့အတှကျ မြှျောလငျ့ခကျြရှိနတောပါ။
ဟယျရီကိနျးဟာ ဂြာမနီနဲ့ ယူကရိနျးနှဈပှဲမှာ (၃)ဂိုးသှငျးယူထားပွီး ဂိုးပေါကျပွနျတှတေ့ာနဲ့ သူက ရပျတနျ့လို့မရတော့တဲ့ခွစှေမျးမြိုးပွသနတောကွောငျ့ လာမယျ့ဒိနျးမတျနဲ့ဆီမီးဖိုငျနယျပှဲမှာလညျး ဟယျရီကိနျးရဲ့ဂိုးတှကေို ဆကျလကျမွငျတှရေ့ဖို့ရှိနပေါပွီ။ ယူကရိနျးနဲ့ပှဲမှာကတညျးက ဟယျရီကိနျး ဟကျထရဈရဖို့အခွအေနကေောငျးတဈခုပိုငျဆိုငျခဲ့ပမေယျ့ သူ့ရဲ့ Volley ကနျခကျြကို ယူကရိနျးဂိုးသမား ပုတျထုတျကာကှယျနိုငျခဲ့လို့သာ ကံဆိုးခဲ့ရတာပါ။
ဟယျရီကိနျးရဲ့ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျမှာ ပရီးမီးယားလိဂျသှငျးဂိုးအမြားဆုံးရှဖေိနပျဆုတှကေို ၂၀၁၅-၁၆၊ ၂၀၁၆-၁၇၊ ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီတှမှော ရရှိခဲ့ပွီး ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာလညျး သှငျးဂိုး(၆)ဂိုးနဲ့ ရှဖေိနပျဆုဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ ဟယျရီကိနျးဟာ သူ့ရဲ့သှငျးဂိုးတှနေဲ့ ဒိနျးမတျအသငျးကို ကြျောဖွတျပွီး အင်ျဂလနျအသငျး ပထမဆုံးအကွိမျ ယူရိုဗိုလျလုပှဲတကျရောကျခှငျ့ရရှိအောငျ စှမျးဆောငျပေးဖို့နဲ့ သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ (၅)ကွိမျမွောကျရှဖေိနပျဆုကို ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရအောငျ ကွိုးစားပွနိုငျမလားဆိုတာတော့ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပဲဖွဈပါတယျ။
(၅)ကြိမ်မြောက်ရွှေဖိနပ်ဆုကို ဟယ်ရီကိန်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်မလား?
ယူရို-၂၀၂၀ အုပ်စုတွင်းမှာ ဂိုးပေါက်ပျောက်ခဲ့ပေမယ့် ဂျာမနီကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်နဲ့ ယူကရိန်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ်နှစ်ပွဲဆက် ဂိုးသွင်းခဲ့သူ ဟယ်ရီကိန်းဟာ အခုဆိုရင် ယူရိုပြိုင်ပွဲရဲ့သွင်းဂိုးအများဆုံးရွှေဖိနပ်ဆုအတွက် ပြေးလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ အခုလောလောဆယ် ယူရိုပြိုင်ပွဲရဲ့သွင်းဂိုးအများဆုံးစာရင်းမှာ ပေါ်တူဂီနာမည်ကျော်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ ချက်အသင်းတိုက်စစ်မှူးပက်ထရစ်ရှစ်ခ်တို့က (၅)ဂိုးစီနဲ့ဦးဆောင်နေပြီး သူတို့နောက်မှာတော့ ဘန်ဇီမာ(ပြင်သစ်)၊ လူကာကူ(ဘယ်လ်ဂျီယံ)၊ ဖော့စ်ဘတ်(ဆွီဒင်)တို့က (၄)ဂိုးစီနဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီကစားသမားတွေအားလုံးရဲ့ လက်ရွေးစင်အသင်းတွေက ပြိုင်ပွဲကနေထွက်သွားရပြီဖြစ်လို့ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်အထိရောက်ရှိနေတဲ့ ဟယ်ရီကိန်းက ရွှေဖိနပ်ဆုဆွတ်ခူးဖို့အတွက် မျှော်လင့်ချက်ရှိနေတာပါ။
ဟယ်ရီကိန်းဟာ ဂျာမနီနဲ့ ယူကရိန်းနှစ်ပွဲမှာ (၃)ဂိုးသွင်းယူထားပြီး ဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့တာနဲ့ သူက ရပ်တန့်လို့မရတော့တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြသနေတာကြောင့် လာမယ့်ဒိန်းမတ်နဲ့ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲမှာလည်း ဟယ်ရီကိန်းရဲ့ဂိုးတွေကို ဆက်လက်မြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေပါပြီ။ ယူကရိန်းနဲ့ပွဲမှာကတည်းက ဟယ်ရီကိန်း ဟက်ထရစ်ရဖို့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ Volley ကန်ချက်ကို ယူကရိန်းဂိုးသမား ပုတ်ထုတ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့လို့သာ ကံဆိုးခဲ့ရတာပါ။
ဟယ်ရီကိန်းရဲ့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်သွင်းဂိုးအများဆုံးရွှေဖိနပ်ဆုတွေကို ၂၀၁၅-၁၆၊ ၂၀၁၆-၁၇၊ ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီတွေမှာ ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာလည်း သွင်းဂိုး(၆)ဂိုးနဲ့ ရွှေဖိနပ်ဆုဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဟယ်ရီကိန်းဟာ သူ့ရဲ့သွင်းဂိုးတွေနဲ့ ဒိန်းမတ်အသင်းကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အင်္ဂလန်အသင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ယူရိုဗိုလ်လုပွဲတက်ရောက်ခွင့်ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးဖို့နဲ့ သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက် (၅)ကြိမ်မြောက်ရွှေဖိနပ်ဆုကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရအောင် ကြိုးစားပြနိုင်မလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဝိနျးရှနျးနီကပေါ့ဘာရဲ့ အကောငျးဆုံးခွစှေမျးကို မွငျတှရေ့ဖို့ ရကျဖို့ဒျက အဓိကကတြယျလို့ အကွံပေးခဲ့